“ကျွန်တော်တို့ဟာစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာကစားမယ့်Beşiktaşပွဲမတိုင်မှီ၊ ကျွန်တော်တို့အလေးအနက်မထားတဲ့လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပွဲရဲ့ဒိုင်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ပွဲစဉ်၏ဒိုင်လူကြီးဖြစ်သော Tugay Kaan Numanoğluသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတအလီကိုကို၏ကုမ္ပဏီများတွင်လုပ်ကိုင်နေသည်ဟူသောအဆိုမှာလုံးဝအတုအယောင်ဖြစ်သည်။ Numanoğluသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥက္ကChairman္ဌနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်မပတ်သက်သောအတိတ်ကာလ မှလွဲ၍ အခြားကလပ်၌ရှိသည်။ သူသည်ဘောလုံးကစားရန်သူ၏အဆိုပြုချက်မှာလည်းလုံးဝစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက Kayserispor ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းနှင့်၎င်း၏ဒိုင်လူကြီး Tugay Kaan Numanoğluတို့၏အငြင်းပွားဖွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များရှိခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်သည်ဤခန့်အပ်မှုနောက်တွင်ပွဲစဉ်၏ဒိုင်လူကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်မေးခွန်းမျှမမေးခဲ့ပါ။ ငါကြေငြာချက်မထုတ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူရကီဘောလုံးမှာပွဲစဉ်မတိုင်မီဒိုင်လူကြီးများကိုဖိနှိပ်ရန်အမျိုးမျိုးသောအမြင်စစ်ဆင်ရေးများပြုလုပ်နေတာကြောင့်တူရကီဘောလုံးအတွက်အသုံးမ ၀ င်တော့ဘူး၊ ။ တနင်္ဂနွေတွင်ကစားမည့်ပွဲစဉ်မှဒိုင်လူကြီးများထံမှကျွန်ုပ်တို့၏ကလပ်၏တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်မှာသူတို့မြင်ကွင်းများကိုခိုးယူခြင်းနှင့်ဖိအားမပေးဘဲစိတ်ဖိစီးစရာမလိုဘဲမျှတပြီးမျှတသောပွဲစဉ်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ခြင်းမရှိဘဲစိတ်ဖိစီးမှုများမကြုံရစေရန်ဖြစ်သည်။ ဒါဘီသည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကစားမည်ဖြစ်သည်။ ပွဲစဉ်နှစ်သင်းစလုံး၏ကစားသမားများကိုကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်စေလိုပြီးထိုက်တန်သောအသင်းကိုအနိုင်ရစေလိုသည်။ FENERBAHÇE SPORTS CLUB “
RESTBET501 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! SUPERTOTOBET0121 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! RESTBET501 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! SUPERBAHİS630 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! BETPAS423 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI! BETBOO868 BEŞİKTAŞ’TAN OĞUZHAN ÖZYAKUP AÇIKLAMASI BETBABA100 “DERBİDE İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ!” BETBABA138 GALATASARAY’DA FLAŞ MUSLERA KARARI! BETBOO618 DERBİ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SÜRPRİZ KARAR BETBABA100 TRABZONSPOR’DAN ERTELEME KARARI!
7 Comments on BETBABA100 FENERBAHÇE’DEN TUGAY KAAN NUMANOĞLU AÇIKLAMASI!
KüL-KeDiSi November 30, 2020 at 7:20 am
GAMZE PINAR December 2, 2020 at 11:40 am
MÜCAHİT December 8, 2020 at 5:40 am
ŞENAY December 12, 2020 at 5:20 am
HANDE December 12, 2020 at 4:20 pm
MURAT December 13, 2020 at 8:20 am